အဆိုပါ Concorde ကျွန်တော်တို့ကိုအသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးခဲ့တယ်
မေးခွန်း အဆိုပါ Concorde ကျွန်တော်တို့ကိုအသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးခဲ့တယ်
3 နှစ်ပေါင်း3months ago #273 by Colonelwing
ဒါဟာလေယာဉ် 3.5 နာရီအတွင်းအတ္တလန္တိတ်ကူးနိုင်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ
အဆိုပါ Concorde ကျွန်တော်တို့ကိုအသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပ်ပေးတော်မူ၏။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဒီအအသံထက်မြန်လေယာဉ်ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ
အဖြေရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် - Vox ရဲ့ဖီးလ် Edwards ကစုံစမ်းစစ်ဆေး။
3 နှစ်ပေါင်း3months ago #274 by Dariussssss
အစစ်အမှန်ရိုးရိုးလေယာဉ်များ၏အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့လောင်စာမီးလောင်နှင့်အတူအသက်အနှစ် 30 + ။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ပျက်စီးလွယ်သော။ ယနေ့လေကြောင်းခရီးသွားဘို့ရုံမသင့်တော်ပါ, လေယာဉ်လေကြောင်းလိုင်းမှပိုက်ဆံရောက်စေဖို့တကယ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ။ ငါကြီးမားတဲ့ Concorde ပန်ကာရယ်, ဒါပေမယ့်အဘယျအပဲရစ်မှာဖြစ်ပျက်ပဲစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
3 နှစ်ပေါင်း3months ago #286 by Gh0stRider203
Dariussssss wrote: အဆိုပါအစစ်အမှန်ရိုးရိုးလေယာဉ်များ၏အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့လောင်စာမီးလောင်နှင့်အတူအသက်အနှစ် 30 + ။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်ပျက်စီးလွယ်သော။ ယနေ့လေကြောင်းခရီးသွားဘို့ရုံမသင့်တော်ပါ, လေယာဉ်လေကြောင်းလိုင်းမှပိုက်ဆံရောက်စေဖို့တကယ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါ။ ငါကြီးမားတဲ့ Concorde ပန်ကာရယ်, ဒါပေမယ့်အဘယျအပဲရစ်မှာဖြစ်ပျက်ပဲစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝမ်းနည်းစရာ, ငါသည်သဘောတူရန်ရှိသည် ...
ဖြစ်ချင်တော့ကျနော်အမှန်တကယ် Concorde အတွက်အခုအချိန်မှာတစ်လှည့်ပတ်-The-ကမ္ဘာကြီးခရီးစဉ်လုပ်နေတာပေါ့။ ဒီယူပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုယူပါ့မယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မြင်ရကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်မျှခြေထောက်သေချာမ
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: maryap
3 နှစ်ပေါင်း3months ago #299 by Colonelwing
အဆိုပါခရီးစဉ် Gentelmen ပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်း Concorde - အသေးစိတ် cockpit ခရီးစဉ် -
Concorde, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်း။ G-BOAC, BA ဘွဲ့ရဲ့ Concorde စင်းကို၏အဓိကလုပ်ငန်းအတွင်းမှအဆင့်များနှင့်လေယာဉ်ရဲ့လှပသော All-analogue ယာဉ်များ၏အသေးစိတ်ခရီးစဉ်ပျော်မွေ့။ မန်ချက်စတာလေဆိပ်မှာအတိတ်သို့တစ်ဦးကခြေလှမ်း။
3 နှစ်ပေါင်း2months ago -3နှစ်ပေါင်း2months ago #327 by Gh0stRider203
ငါသည်ငါ့လက်ဝှေ့သမားထွက်ကိုပြောင်းလဲသွားရနေချိန်မှာငါ့ကို excuse .....
btw, ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး facebook ပေါ် vid shared, ငါဖြစ်၏သည့်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ခြင်း, သင်တို့ကိုငါအကြွေးဗိုလ်မှူးကြီးပေးခဲ့တယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အဆိုပါ vid ပို့စ်တင်ဘို့!
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3နှစ်ပေါင်း2months ago နေဖြင့် Gh0stRider203.
3 နှစ်ပေါင်း2months ago #341 by Colonelwing
0.177 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်